ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 12:03 AM
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမှတ်တရပေါ့ညီရာ
အော်အချစ်အချစ် အချစ်ဆိုတာ အချစ် < အချစ် လား
အချစ် > အချစ် လားဗျာ အားလုံးဟာ အချစ်=အချစ်
ဖြစ်ကြရင် သိပ်ကောင်းကြမယ်ဗျာ . . .
မောင်လေးရေ......... ဒဏ်ရာတွေနဲ့တောင် သူငယ်ချင်းအတွက် ရေးပေးတဲ့ ကဗျာလေးက သိပ်ကိုအသက်ဝင် ပီပြင်နေဆဲပါ။ နောက်ဆုံးအပိုဒ်လေးကတော့ တကယ့်ကို လှပတဲ့ အိပ်မက်တွေနဲ့ ချစ်သူတွေအတွက် ကံကောင်းခြင်ပေ့ါ။ မောင်လေးလည်း တနေ့မှာ နားလည်ပြီး အချစ်ကို တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးတဲ့ ချစ်သူနဲ့ ဆုံဆည်းနိုင်မှာပါ။ ခံစားချက်ဆိုတာ ခံစားဘူးမှ နားလည်မှာပါ။ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ မောင်လေး။
ိုဟုတ်ပါ့... ငါ့အစ်ကိုက ခံစားနေရတာကို... ဟွန်း...း))). ဒါပေမယ့် အစ်ကို့ရဲ့ ကဗျာလေးက ကိုယ်တိုင်ခံစားပြီး ရေးထားတယ်ထင်ရလောက်အောင်ကို ကောင်းတယ်ဗျာ... နောက်ခံသီချင်း “ပြော” ဆိုတာကြောင့် ပိုပြီး ခံစားရတယ်.....
ကိုတူး ကျွန်တော်ဘာမှဆက်မပြောသွားတော့ဘူး . . . .
အစ်ကို့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို နက်ဖြန်အတွက် မေးလ်နဲ့ပို့ပေးလိုက်တယ်...။ ကိုတူးရဲ့ ညရဲ့ကောင်းကင်ဆိုတဲ့ နာမည်လေးနဲ့ ဘလော့လိပ်စာလေးပါ အစ်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ...။
သူက အစ်ကို့ကိုပူဆာနေလို့ပါ...။ သူ့ရည်းဇားအတွက်တဲ့လေ...ဟွင်းးးးးးးးး
(နက်ဖြန်ကျရင် ချောကလက် အစ်ကိုဝယ်ထားမယ်...။ ဒို့ညီအစ်ကိုတွေ အတူတူစားကြမယ်လေ...၊ ဗညားပါခေါ်ခဲ့....း))
အားပေးသွားတယ် ဗျို့ ...
အစ်ကိုနဲ့ ဘ၀တူ အစ်ကို့ညီရှိတယ်လေ... ကံမကောင်းသူအချင်းချင်း ချီးယာ့စ်..ပေါ့
ဘ၀တူတွေ ရှိပါတယ်... ကျွန်မ တစ်ခါမှ ချစ်သူများနေ့ကို မကျင်းပ ဖူးဘူး...
ဘ၀တူတွေ ရှိနေမှတော့ အေးဆေးပေါ့... ;) နော့်
ချစ်သူအသစ် သံယောဇဉ်တွေ ဇကာတင်စစ်ပြီးမှ အချစ်တွေ့နိုင်ပါစေဗျာ ...။
ခံစားချက်တွေထဲချည်းပဲလည်း မနေနဲ့အုံး။ အပြင်ထွက်ပြီး အောက်ဆီဂျင်လေး ရှူသွင်းလိုက်ပါ။ နှလုံးသားတစ်ခု လန်းဆန်းရအောင်ပေါ့။